Kuberekwa - hongu kana kwete? Ndeipi yakanaka kune mwana wangu?
Kunyorera | mwana
Manzwiro ekuchengeteka panguva yekuyamwisa
Ndinofanira kunwisa mwana wangu here? Mubvunzo vazhinji vanaamai vanotarisira vanobvunza. Kune vamwe chinhu chakajeka, asi kwete kune vamwe. Vakawanda vanoshamisika kuti ndezvipi uye kuti ndezvipi zvingaita "zvakanaka" kana kuti chii chaunotarisa kana uchiyamwisa.
Kunwisa - nyaya yekunzwa
Mwana wekutanga kunyanya akachengetedzeka, asi akawana vanaamai vakawanda vanoona zvinoshamisa nguva nenguva kana mwana wechipiri kana wechitatu achingoerekana aine zvishuvo zvakasiyana zvakasiyana nezvekuyamwisa, savakoma vake vakuru.
Ndinofanira kunwisa mwana wangu here? Mashoko uye mazano
Kuyamwisa sekusabvumirana kukurukurirana pakati peamai nevana
Zvisinei, ruzivo rwemadzimai nevanyamukuta rinoratidza kuti kushungurudzika kana kunyanya kuronga kunwisa kunonzwisisika. Nokuti kune rumwe rutivi kune ruzivo, asi kune rumwe rutivi mwana wacho.
Uye izvo zvinongotaura chete munyaya yacho. Zvaanoda, zvaanoda, kunzwa nzara, asiwo chido chekuswedera pedyo nekuchengeteka chichasarudza nguva uye rwiyo rwekuyamwisa kwenguva. Pashure pezvose, mugari muduku wepasi pano ndiye munhu mukuru maererano nekuyamwisa.
Kana Amai vachivimba nemwana wavo, vanobatanidzwa nayo, uye vane imwe simba, iyo ndiyo nzira yakanakisisa yekukunda matambudziko ekutanga. Izvi zvinoshandawo kumubvunzo wekureba kwenguva yakafanira sei kunwisa. Zvakare, hapana mutemo, hapana mutemo. Chero bedzi iyo inoda amai nevana, zvakanaka.
Kana kudiwa kwechimwe chikamu kuchipera, nguva yakawanda iyo imwe yerimwe rutivi inewo intuitively inopindirana nekunzwa kuti inguva yekumira. Kukurukurirana pakati peamai nemwana kunongowanikwa chete nezvekudzidzira uye manzwiro, izvo hazvisi zvakasiyana pakunwisa.
Kana kuyamwisa kunofungidzirwawo kune rumwe rutivi rwemichero, rinoramba richisimbisa kuti hapana chakafanana chinotsiva mukaka wemvere. Iyo inoshandiswa mishonga inowanikwa mubhizimisi inobva mumombe, mukaka we soyasi kana mare uye inomiririra mukaka sezvaunogona. Asi havakwanisi kunyorwa saizvozvo.
Nokuti izvo chete izvi zvine zvakakosha zvekudzivirira zvirwere izvo munhu muduku anoda, kunyanya muhafu yekutanga yegore rekudzivirira kwake. Izvi zvinonyanya zviri mumirasire, iyo inonzi inonzi foremilk, iyo inowanikwa mumazuva ekutanga mushure mokuberekwa. Zvadaro zvinouya pakuumbwa kweiyo chaiyo mukaka wehadzi.
Heano hutano zvakare chimwe chinhu chakasiyana. Panzira kubva pahuma kusvika kumukaka wamai, mapuroteni anowedzera, mafuta neyehydrohydrate zvinowedzera. Iyo yakawanda inoberekwa inobva pane zvinodiwa-inopa chiyero, asi chido chinogona kusiyana. Heino mazita anokosha zvikuru achifananidza mukaka wemvere nemukaka wemhou:
Tafura inoratidza kuti mukaka wemunhu chete unonyatsoenderana nezvinodiwa zvechecheche. Mukaka wekango une mapuroteni akawanda kana mapuroteni emakemikari kune mwana, izvo zvinogona kukuvadza itsvo. Nokudaro, mukaka wemhou haufaniri kupiwa mugore rokutanga rehupenyu. Zvine mahydrohydrate nemafuta, pane rumwe rutivi, zvakanyanya.
Zvisinei, kuwedzera kumubvunzo wekudya, kuyamwisa kunogutsawo rimwe basa rinokosha: hukama hwepfungwa pakati paamai nevana. Kunyanya pakutanga, apo iwe unofanira kutanga "kuziva mumwe nomumwe", kana mwana ari kuwana nzira yake pasina kudzivirirwa kwekudziya kubva mudumbu raMama munzvimbo yake itsva uye achiri kuda kuchengetedzwa kwakanyanya. Panguva iyoyo kunwisa kunobatsira kukurudzira izvi.
Kunwisa kunopa mwana kuchengeteka
Ukama hwepedyo, hune rudo huri pakati peamai nemwana, hunobudiswa panguva yekuyamwisa, huriwo hwakaoma kutora chimwe chinhu. Zvinokosha pano inzvimbo ine rugare rukuru, shungu uye nyaradzo.
Kwete TV kana redhiyo inofanira kufamba nenzira, foni inofanira kuvharwa uye mabasa epamba anofanira kupiwa mumavhiki ekutanga kana zvichikwanisika. Munzvimbo iyi, vose vanogona kunakidzana nehukama uye kuvaka hukama hwepedyo nemumwe.
Ichokwadi kuti kunyamwa kunobatsirawo. Iko nguva dzose uye kwose kwose zvokudya zvakakodzera, zvakakodzera kurongeka uye kutonhora, zvakagadzirirwa zvakagadzirwa uye kusagadzikana. Hapana kutakura bhodhoro, bhendi inopisa uye zvimwe zvinhu zvinodiwa. Izvi zvinobvumirawo amai kuti vawedzere kushanduka uye kushanda kwesangano shoma.
Zvose mune zvose, zvakagadzirisa huchenjeri hwezvisikwa kuitira kuti kunyamwa ndiko kunotangira hupenyu hupenyu hwemwana muduku mutsva. Nutritional, emotional and logistic. Zvechokwadi, kune vakadzi vasingakwanisi kana vasingadi kuyamwa. Ikokupedzisira zvakare kwakanaka, nokuti hapafaniri kuva nekumanikidzirwa pamusoro pemanzwiro ako. Izvozvo hazvingaiti zvakanaka kumativi ose maviri. Zvisinei, kana pane chido uye zvichida kutamwisa, izvi zvinofanira kunge zvakasarudzwa kune imwe nzira yekugadzirira.
Wakambozviona here? Free Kuchengeta mapeji evana vari pasi pezvokudya nekumwa!
Kunwisa - Itaiwo Baba